Famoaham-boky literatiora: hiketrika an’i “Vonisoa” sy i “Mendrika” i Zara Ainga | NewsMada
Ny taona 2015 sy ny tapatapaky ny taona 2016, niafin’endrika tao amin’ny kaonty «facebook» i Zara Ainga. Toerana nizarany ny sanganasany, nahababo olona maro, indrindra ireo tovovavikely (Babon’ainga). Angamba mety ho anisan’ireny i « Vonisoa » sy i « Mendrika »…
Poetan’ny tam­ba­jo­tra… Na­hay nitrandraka ny teknolojia ho fitaovam-pandrosoana eo amin’ny sehatry ny literatiora i Herinirina Tojosoa, fantatry ny maro amin’ny hoe, Zara Ainga, eo amin’ny tontolon’ny haisoratra malagasy. Anisan’ny mitantana ny fikambanana “Y-sorakanto”, fikambanana nijoro efa ho roa taona, izy. Dimy taona katroka nanoratana amin’ity oktobra ity ny lehilahy ary hamoaka boky ho fanamarihana izany.
Ny fahadimy sy fahenina no vokatra mivoaka izao: i «Vonisoa» amboaran-tononkalo ahitana pejy 100, izay miresaka fitiavana angalarina sy ny fiainana maro hafa. Ao koa i «Mendrika», izay am­bo­aran-tsombintantara, 200 pejy. Sombintantara amin’ny lafiny maromaro, toy ny fitiavana misandrahaka amin’ny endriny maro: fitiavan-tanindrazana, fitiavan’olon-droa, fitiavana amin’ny samy mpinamana sns…
Manoratra karazana literatiora i Zara Ainga. Anisan’ny manavanana azy ny fanoratana tononkalo sy ny sombintantara. Maro ny hetsika efa nanehoany ny talentany, in­drindra ny teto Iarivo. Nisy ny boky manokana efa nivoaka tao anatin’izay dimy taona izay, toy ny “Ilay dokoterakeliko”, ny “Hafeniko tsy ho fantany”, “Iny taratasiko iny”… Ao ireo niarahana ami­na namana, toy ny “Sa­ka­ma­laho sy Havozo”, tamin’i Tsy Avahana.
Ilaina ny famakiana boky
«Betsaka ny tanora miroso manoratra ankehitriny. Vaovao tsara izay, saingy, hadinon’izy ireo hoe tia mamaky aloha vao manoratra. Mila tia mamaky boky isika raha te hamokatra asasoratra kanto satria betsaka ny pitsopitsony tokony hizarana sy tokony ho fantatra mba tsy hampivoaka ny fitsipika mamaritra ny karazana literatiora ary mba tsy ampifangaro ny zavatra atao amin’ny kolontsaina hafa . Izay ny zava-dehibe aloha.», hoy i Zara Ainga.
Ny fiezahana mampiakatra ny lanjan’ny literatiora malagasy, hahafahana mandray anjara asa tsara any amin’ny fanabeazana…Mamerina ny fitiavan’ny olona ny boky amin’ny fiteny malagasy no anisan’ny tanjon’ity mpanoratra manana ny mampiavaka azy eo amin’ny literatiora ity.